hamropusta.comLatest News मोबाइल फोनको लतले एक्लिँदै बालबालिका – hamropusta.com
सुनसरीको धरानकी १० वर्षीया परी राईको दिन मोबाइलको स्क्रिन हेरेर सुरु हुन्छ। उनी उठ्न साथ मोबाइलको हेर्छिन्। खाजा खाँदा होस् वा खाना खाँदा उनलाई मोबाइलमा केही न केही हेर्नैपर्छ।
‘बिहान उठ्न साथ मोबाइल नहेरी अरु कुनै काम गर्नु मान्दैन,‘ परीकी आमा सुम्निले भनिन्, ‘मोबाइल भेटेन भने खाना खानु पनि मान्दैन खै कस्तो लत बस्यो।’
परी बिहान १० बजेदेखि अनलाइन कक्षामा बस्छिन्। त्यसपछि लगभग तीन घण्टा उनी ल्यापटमा बिताउछिन्। अनलाइन कक्षा सकिनबित्तिकै मोबाइलमा कार्टुन हेर्न बसिहाल्ने सुम्निमाले बताइन्।
परीका बुवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यसैले उनको रेखदेखको जिम्मेवारी सुम्निमा एक्लैको काँधमा आइपरेको छ। सुरुमा परीलाई भुलाउन मोबाइल दिने गरेकी उनी अहिले छोरी एक क्षण पनि मोबाइलबिना बस्न नसक्ने भएपछि तनाबमा छिन्। पछिल्लो समय सुम्निमाको मनमा एउटै मात्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ–बच्चालाई मोबाइलको लतबाट कसरी छुटकारा दिलाउने?
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–९ की पार्वता थापाको पनि सुम्निमाको जस्तै चिन्ता छ। उनकी १४ वर्षीया छोरी छिन्। छोरी सानो छँदा घरधन्दा भ्याउनुपर्ने अवस्था भएकाले मोबाइल खेलाउन दिएर भुलाउँथिन्। उनकी छोरीलाई मोबाइल खेलाउने बानी भयो। अहिले मोबाइल भएपछि आमाबुवा, साथीभाई नै भुल्ने र कोठाबाट बाहिर निस्कन नमान्ने जस्ता क्रियाकलापले गर्न थालेपछि आफू आजित बनेको पार्वताले सुनाइन्।
‘सानोमा खेल्न जाँदा कोठामा थन्नुपर्ने हुन्थ्यो। जब उमेर पुग्दै गयो बाहिर जा भन्दा पनि सुन्दैन,‘ पार्वता भन्छिन्, ‘अबका बच्चाहरु सबै एकलकाँटे हुन्छ भन्ने डर लग्न थालेको छ। न साथीभाई चाहिन्छ न आफ्न्त।’
विराटनगर–१० की सरस्वती बस्नेत पहिलेको बच्चा र अहिलेको बच्चाबीच धेरै फरक रहेको बताउँछिन्। ‘पहिलेका बच्चाहरु बिहान उठेर हातमुख धोएर, केही समय पढाइलाई, केही समय घरको काममा केन्द्रित हुन्थे‚’ उनले भनिन्‚ ‘अहिलेका बच्चाहरु हरेक समय मोबाइलमा नै खेर फाल्छन्। यसो हुनुमा अभिभावकको पनि कमजोरी छ।’
पछिल्लो समय अभिभावकको व्यस्त जीवनशैली र प्रविधि प्रयोगका कारण बालबालिकाहरु समाजमा घुलमिल हुन नचाहने, एकान्तमा बस्न रुचाउनेजस्ता आनीबानी बढ्न थालेको विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. सुरेस साह बताउँछन्।
मोबाइल फोन भेटेपछि घण्टौंसम्म एक्लै बस्ने, कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी बोल्ने जस्ता संस्कार बालबालिकामा संस्कार हराउँदै गएको उनको बुझाइ छ। अत्यधिक मात्रामा मोबाइल फोन चलाइरहँदा यसले शारीरिकसँगै मानसिक समस्या पनि ल्याउने उनको भनाइ छ।
धेरै समय एकै ठाउँ बसेर मोबाइल चलाइरहँदा बालबालिकाको मांशपेशी बलियो नहुने समस्या समेत देखा पर्ने डा. साह बताउँछन्। जसले गर्दा खेलकुदमा रुची कमी आउने समस्या उत्पन्न हुन्छ। उनीहरुमा छिटो रिसाउने जस्ता समस्या देखिने‚ आँखा र मस्तिष्कमा समेत असर पर्ने साहको भनाइ छ।
लत छुटाउन कठिन
मोबाइलको लतबाट बालबालिकालाई छुटाउनुपर्ने अभिभावकहरु बुझेका छन्। तर‚ कोभिड महामारीका कारण अनलाइन कक्षा हुने भएकाले मोबाइल नदिइ नहुने अवस्था छ।
त्यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने समय अभिभावकले छुटयादिन जरुरी रहेको डा. साह बताउँछन्। बच्चालाई राति ओछ्यानमा बसेर मोबाइल हेर्न नदिने‚ एक घण्टा, आधा घण्टा गर्दै मोबाइल हेर्ने लत छुटाउन सकिने उनको सुझाव छ।
‘कतिपय समयमा अभिभावकहरु पनि मोबाइलमा व्यस्त रहने हुँदा आफ्नो साथैमा रहेको बालबालिका के गर्दैछ भन्ने ध्यान दिएका हुँदैनौं‚ यस्तो अवस्थामा अभिभावक पनि सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ,’ डा. साहले भने, ‘बालबालिकालाई अभिभावकले पनि समय दिनुपर्छ। उनीहरु एक्लै बस्दा उनीहरुको नजिक गएर मित्रताको भाव व्यक्त गर्दा पनि बालकालिकालाई मोबाइले निम्त्याएको एक्लोपनाबाट छुटकारा दिन सक्छौं।’
प्रविधिको विकाससँगै बालबालिका प्रविधिमैत्री भए पनि यसको अत्याधिक प्रयोग र लतले सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा असर पार्ने महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डा. चन्द्र उपाध्याय बताउँछन्।
प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगको न्यूनीकरण र सदुपयोग हुन नसके सामाजिकीकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै जाने डा. उपाध्यायको बुझाइ छ।
‘अहिलेको महामारीले घरभित्र नै थुनिनुपर्ने बाध्याता पनि एउटा पाटो हो। तर‚ आजभोलि सामान्य अवस्थामा पनि परिवारको एक सदस्यदेखि अर्को सदस्यमा संवाद कम हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसले विस्तारै समस्या निम्त्याउन थाल्छ।’
प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक विकासलाई प्रभाव पार्दै गइरहेको डा. उपाध्याय भनाइ छ। मोबाइल, इन्टरनेटमा नै घण्टौसम्म अल्मलिने हुँदा परिवार साथीभाईबाट टाढा हुने भएकाले बालबालिकाहरु असर गर्ने उनको बुझाइ छ। डा. उपाध्यायले पछिल्लो समय भइरहेको अनलाइन कक्षाले पनि बालबालिकाहरुलाई मस्तिष्कमा असर पर्ने बताए।
‘हामी अहिले अनलाईन कक्षाका कुरा गर्छौं। यसको पनि कति घण्टा पढाउने भन्ने हुनुपर्छ‚’ उनले भने, ‘हामी भौतिक उपस्थितिसहितको कक्षामा त ब्रेकको कुरा गर्छौं। अनलाइन कक्षामा पनि ब्रेक गर्दै पढाउनु पर्छ। लामो समयसम्म अनलाइन कक्षा पढाउँदा त्यसको नकारात्मक असर कलिलो बालबालिकाहरुमा पर्न गएको छ।’
कोरोना महामारीका कारण पनि लामो समय मोबाइल, ल्यापटपमा अध्ययन गर्नु पर्ने पछिल्लो समयका बालबालिकाको बाध्यता छ। त्यसपछि फुर्सद हुनेबित्तिकै इन्टरनेटमा मनोरञ्जन लिने वा भिडियो सामग्री हेर्ने बानी लागेको छ। यसले भोलिका दिनमा पारिवारिक र सांस्कृतिक समस्या आउने सक्नेतर्फ अभिभावक सचेत हुनुपर्नेमा पनि उपाध्यायको सुझाव छ।